कुन इन्स्योरेन्स कम्पनीको कति प्रतिशतले पुँजी वृद्धि हुन बाँकी ? ( ताजा अपटेड ) – Insurance Khabar
कुन इन्स्योरेन्स कम्पनीको कति प्रतिशतले पुँजी वृद्धि हुन बाँकी ? ( ताजा अपटेड )
प्रकाशित मिति : १७ बैशाख २०७६, मंगलवार १८:०९
हाल नेपाली दोश्रो बजारमा ७ वटा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका शेयर किनबेच हुने गरेका छन । जसमा तीन वटा मात्र जीवन बीमा कम्पनीले २ अर्ब पुँजीको लक्ष्य हासिल गरेका छन् ।२ अर्ब पुँजीको लक्ष्य हासिल गर्नेमा नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स ,नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स र एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स छन् । नेपाल लाईफको पुँजी ४ अर्ब ३९ करोड छ भने नेशनल लाईफको पुँजी ३ अर्ब छ । एसियन लाईफ इन्स्योरेन्सले ६० प्रतिशत हकप्रद शेयरका लागि बुक क्लोज गरिसकेकोले कम्पनीको पुँजी २ अर्ब पुगेको छ।
कसले कति पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने छ ?
त्यस्तै लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपालले ३४ प्रतिशतले आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्सले वार्षिक साधारणसभा बाट १०० प्रतिशत हकप्रद शेयरको प्रस्ताव पारित गरेको छ। सो हकप्रद पश्चात कम्पनीको पुँजी १ अर्ब ८७ करोड पुग्ने छ।
१५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी मध्ये ६ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले मात्र आफ्नो पुँजीको लक्ष्य हासिल गरेको अवस्था छ। नेको इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स,एभरेस्ट इन्स्योरेन्स र नेपाल इन्स्योरेन्सले १ अर्ब पुँजीको हासिल गरेको अवस्था छ ।
आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सको अहिलेको पुँजी ९७ करोड २० पुगेको छ। कम्पनीले अझै ३ प्रतिशत पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने छ , जुन बोनस शेयर बाट आउने सम्भावना देखिन्छ ।
त्यस्तै लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको पुँजी १३ प्रतिशतले वृद्धि हुन बाँकी छ। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले २० प्रतिशत हकप्रद निक्साशन गर्न विशेष साधारण सभा बोलाएको छ। प्रस्तावित हकप्रद पछि कम्पनीको पुँजी १ अर्ब पुग्ने छ।
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको पुँजी १५ प्रतिशतले वृद्धि हुन् बाँकी छ जुन बोनस शेयर बाट आउने सम्भावना देखिन्छ । त्यस्तै एन एल जी इन्स्योरेन्स र प्रुडियन्सल इन्स्योरेन्सले अझै आफ्नो पुँजी ५६ प्रतिशतले वृद्धि गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै युनाईटेड इन्स्योरेन्स र रास्ट्रीय बीमा कम्पनीले आफ्नो पुँजी क्रमश २३१ प्रतिशत र २७५ प्रतिशतले वृद्धि गर्नु पर्ने देखिन्छ । युनाईटेड इन्स्योरेन्सको २४० प्रतिशत हकप्रद शेयर दिने प्रक्रियामा छ । उक्त हकप्रद पश्चात इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी पुग्ने छ ।